Cebu, nhọrọ ndị njem nleta ọzọ na Philippines | Akụkọ Njem
Cebu, ndị ọzọ na njem nleta na Philippines
Mariela Carril | | Philippines, Nduzi
Na Tuesday, anyị kwuru banyere Boracay, otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na Philippines. Ọ bụ mecca nke njem nlegharị anya nke mba ụwa ma anyị na-enye ozi niile dị mkpa iji nwee ike isi Manila gaa ebe a mara mma nke anyanwụ, ụsọ osimiri, oke osimiri na ọchị.
Mana ọ bụrụ na i lee anya na maapụ Philippines ị ga-ahụ na ọ dịkwa Zebu. Ọ bụ mpaghara agwaetiti dị n'etiti etiti Visayas nke nwere agwaetiti ukwu na ihe karịrị agwaetiti 160 gbara ya gburugburu. Cebu, isi obodo, Ọ bụ obodo kacha ochie na Filipinz ma taa ọ bụ obodo ọgbara ọhụụ, ewu ewu ma nwee nnukwu mmepe. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye n'ụsọ osimiri ahụ paradaịs ... nke ọma, ị nwere nhọrọ ndị njem nleta ọzọ na Philippines! I ga-ekwu na isi onye nke masuru gi.
1 Cebu, nke mbụ isi obodo Philippines
2 Ihe ị ga-eme na Cebu
Cebu, nke mbụ isi obodo Philippines
Tupu Spanish abịarute, agwaetiti ndị ahụ bụ alaeze nke onye isi si Sumatra na-achịkwa. Spanish ga-abata na mbido narị afọ nke XNUMX na site na mgbe ahụ na akụkọ ihe mere eme ha bụ akụkụ nke akwụkwọ ọdịda anyanwụ.
Isi agwaetiti, Cebu, bu uzo di warara ma di ogologo nke na-aga kilomita 196 site na ugwu ruo na ndida na na widest ebe ọ bụ sonso 32 kilomita. O nwere ugwu na ugwu, n’agbanyeghi na o dighi oke adi, ma ha gbara ya gburugburu osimiri mara mma, coral reef, agwaetiti ndị ọzọ na ndụ mmiri ihe ngosi. Iji nụ ụtọ ya n'ụzọ zuru ezu ị ga-aga n'oge ọkọchị, na mpụga June ruo December, na oge ajọ ifufe.
N'agbata Machị na Mee, ọ dị ọkụ, ọ nwere ike iru 36 ºC n'ụzọ dị mfe, mana ọ na-eme atụmatụ na n'ime afọ ahụ dum arc dị n'etiti 24 na 34 ºC. Na nkenke, oge dị ala bụ site na May na June na n'etiti Septemba na Ọktọba na ọnọdụ okpomọkụ n'etiti 25 na 32 ºC na mmiri ozuzo. Oge dị elu bụ Eprel, Mee na June na-enwekwu ọkụ na ifufe, mana obere mmiri ozuzo.
Ọnụ ala, obere njem na ọtụtụ ntinye na otu na ndị ọzọ njem, anyanwụ ọzọ, ndị ọzọ na ọnụahịa dị elu na nke abụọ. E nwekwara ibu nnukwu oge nke bụ ekeresimesi, afọ ọhụụ, afọ ọhụrụ ndị China na Ista. Ọ na-agbakọ ọnụahịa ahụ ga-arị elu 10 ruo 25% karịa.
Ihe ị ga-eme na Cebu
E wezụga ihe ndị na-adọrọ mmasị ya, nke anyị ga-ekwu maka ya mgbe e mesịrị, obodo ahụ n'onwe ya mara mma ma anyị nwere ike ịrara ya ụbọchị ole na ole. A na-ahụ akara Christian na Spanish n'akụkụ ọ bụla yana ụka, obe na aha n'okporo ámá. Bụ Magellan's Cross, the Minil Basilica nke Santo Niño, ebe nsọ nke Magallanes na Colón Streetdị ka ihe atụ, onye kasị ochie n’obodo ahụ.
Nwere ike ịga na Fort San Pedro, Katidral Metropolitan, Talọ Taoist nke Cebu, ụlọ Jesuit, Casa Gorordo ochie na nke mara mma site na narị afọ nke XNUMX na saịtị a maara N'elu nke dị na Busay ma ọ bụghị ihe ọ bụla mana ọmarịcha echiche nke dị kilomita iri na abụọ site na etiti obodo nwere anya ngosi 12º.
Gagharị n’ime obodo, ị nwere ike iji igwe nwere ụkwụ atọ nwere ikike maka mmadụ atọ. A na-ebo pesos asaa Philippes ebubo na otu kilomita. E nwekwara multitaxis na jeepney mara ezigbo mma. Enweghị ụkọ tagzi na bọs mara mma. A na-akwụ ụgwọ ihe niile na ego mpaghara, naanị nnukwu ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-anabata kaadị akwụmụgwọ.
Ọ dị mma ugbu a Kedu maka osimiri ndị dị na Cebu? Ọ bụrụ n ’ọ ga-anọ ụbọchị ole na ole, nhọrọ kacha mma agaghị agabiga oke isi obodo ahụ. N’ihu ya ka the Agwaetiti Mactan, ebe mmiri na-atụ aro ya na mma mara mma. A makwaara ya dị ka Lapu Lapu y e jikọtara ya na obodo nwere akwa abụọ. Ọ bụ agwaetiti na-ekwo ekwo na nke saịtị kachasị mma na mpaghara.
N'ebe a na Mactan bụ ebe ebe ntụrụndụ dị na ndị njem na-eme njem site na Manila ma ọ bụ Korea ma ọ bụ Hong Kong na-abịa ogologo n'ihi na o nwere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa. Mactan bụ nnukwu agwaetiti coral maka ezumike. Ndị gbara ya gburugburu bụ ọdọ mmiri Tambuli na Kontiki na ebe nsọ mmiri nke Hilutungan Island. Osimiri na ndakpu mmiri, nsị na ụgbọ mmiri bụ ihe ọ na-enye.
Abia na ulo, enwere otutu ihe site na mmezi ego rue ebe ndi kwesiri ka ha no na ndepụta Condé Nast Traveler. Cheta na Mactan erughị otu elekere si Cebu na minit 45 site na Manila ọ dịghị ihe ọzọ. Nwere ike ibata na ụgbọ elu mba ofesi si Narita na Japan, Incheon na South Korea, Singapore ma ọ bụ Hong Kong. Mana na-enweghị ịgafe na Mactan Island enwere ọdụ osimiri ndị ọzọ akwadoro yana ụfọdụ nọ n'agwaetiti ndị ọzọ.
na Agwaetiti Camotes Enwere ha anọ, Tulang, Pacjian, Poro na Ponson, ha niile nwere oke osimiri na họtel. Otu ihe ahụ Agwaetiti Badian ebe enwere ebe izu nzuzo di egwu. N'etiti n'agwaetiti Cebu na La Leyte bu ihe mara mma Agwaetiti Bohol, makwaara nke ọma ma nwee oke osimiri.
La Agwaetiti Malapascua, agwaetiti nke ndị ọkụ azụ, bụ otu n'ime ebe njedebe kachasị elu na otu n'ime ihe nzuzo kachasị bụ Agwaetiti Sumilon. Na nke mbụ, mmiri bụ eze zuru oke, ọ bụ ezie na anaghị emepe emepe maka njem nlegharị anya, ikekwe otu ihe na-adọrọ mmasị. Enweghị ndị ATM, ụlọ oriri na ọ theụ theụ ndị ahụ dị n’etiti okporo ụzọ ndị obodo ahụ, a naghịkwa anabata euro ma ọ bụ dollar.
bantayan Ọ bụ agwaetiti Iden nwere mmiri doro anya na osimiri ọcha. O nwere otu ụlọ ụka kacha ochie na Philippines, narị afọ anọ ma nwee ọtụtụ ụlọ oriri na ọ resụ hotelsụ na ebe ezumike nke ndị ị ga-efu na ọnwa. Ahịa? Site na $ 60 wee gbagoo
Dịka ị pụrụ ịhụ, onyinye a na mpaghara a nke Philippines dị ọtụtụ karịa nke dị na Boracay. N'ebe a, ị ghazie onwe gị nke ọma karịa n'ihi na agwaetiti ọ bụla bụ ebe njedebe. Ha niile nwere ụlọ oriri na nkwari akụ ma ha niile na-enye otu ma ọ bụ obere otu, mana ọ dị m ka Ọ bụrụ n’ịga mmiri, ịmịkọrọ mmiri na ndozi mmiri na Philippines, ebe kachasị mma niile bụ Cebu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Cebu, ndị ọzọ na njem nleta na Philippines
Ihe ị ga-eme n'oge oyi na France
Agrigento (SICILY): njem na Gris oge ochie